आप्रवास – Daunne News
इजरायलको रोजगारी पुन: प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
लालपुर्जा खोज्दा भेटियो आफ्नै मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र !
जीवनको महत्त्वपूर्ण समयमा दुःख गरेर कमाएको रकम केमा खर्च गर्नुहुन्छ ? प्रायः नेपालीको चाहना घर, घडेरी किन्ने नै हुन्छ । अझ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्देश्य नै घर जग्गा जोड्ने हुन्छ । तर, दुःख गरेर किनेको जग्गाको रेखदेख…
जापानमा बसेका व्यक्तिकाे नक्कली मृ’त्यु दर्ता गरेर जग्गा बिक्री गर्ने प’क्राउ
काठमाडाैं । जापानमा बसेको व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौंको कीर्तिपुरमा रहेको ११ आना २ पैसा जग्गा बिक्री गर्नेहरु पक्राउ परेका छन् । सो घटनामा संलग्न रहेकाे आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान…
विदेशको कमाइले श्रीमतिको नाममा जग्गा, श्रीमती अर्कैसँग टाप !
काठमाडौं । मरुभूमिमा पसिनाका थोपा–थोपा सिँचाइ गरेर आर्जेको सम्पत्ति लिई गाउँ फर्केर परिवारका साथ सुखी जीवन बिताउने भनी हरेराम साइले देखेको सपना तुहिएको छ। बारा जिल्ला कमोवा गाउँका हरेराम दुबईबाट आफ्नो गाउँ फर्किएपछि पाँच…
दुर्गा प्रसाईंलाई यूएईका अधिराजकुमारले दिए सुनको लौरो
झापा । तीनदिने नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का अधिराजकुमार जुमा अल मोक्तुमले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सुनको लौरो उपहार दिएका छन् । श्री एरलाइन्सको चार्टर विमानमार्फत…
विदेश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विदेश पठाइदिन्छु भनी विभिन्न व्यक्तिसँग रु २१ लख ४४ हजार ठगी गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले कास्की पोखराकी २२ वर्षीया एक…
दोहा – साउदीमा ८७ जना अवैधानिक नेपालीले बहिर्गमन (एक्जिट) भिसा पाएका छन् । ८-१६ जुनसम्मको अवधिमा रियाद र दमामबाट प्रोसेसिङ् गरिएका मध्ये थप ८७ जनाको एक्जिट भिसा प्राप्त भएको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार…
कीर्तिपुरस्थित भ्याली कन्सल्टेन्सीले सोलुखुम्बु नेलेका बाबुराम विकलाई विद्यार्थी भिजामा कोरिया पठाइदिने भन्दै साढे सात लाख रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ । विद्यार्थी भिसाको जुन अफर आयो त्यसैमा पठाइदिने भन्दै एकमुष्ट ७ लाख ५० हजार…
अष्ट्रेलिया गएको ६ महिनामै एक नेपाली विद्यार्थीको निधन, परिवारको रुवाबासी
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा पर्ने मेलवर्नमा एक २१ वर्षिय नेपाली विद्यार्थी को निधन भएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका युवा संयोजक बबिन मिश्रका अनुसार चितवन स्थाई घर भएका समिर कोइराला बुधबार दिउसो आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा…
भैरहवामा खुल्यो श्रम कार्यालय, श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु भए लगत्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा पनि खुलेको छ । विदेश जानेहरूका लागि पूर्व श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम सो शाखाबाट हुने भएको छ । …
स्विट्जरल्याण्ड निधन भएका तनहुँका पृथ्वी भण्डारीको उतै…
असार ९, १४:११
विप्लव समूह छोडेका ओम पुनसहित चार केन्द्रीय सदस्य माओवादी…
असार ९, १४:०८